कम्प्युटर चलाउनु हुन्छ ? यस्ता छ्न महत्त्वपूर्ण सट-कट किहरु! – Public Health Concern(PHC)
के तपाई घर वा अफिसमा कम्प्युटर वा ल्यापटप चलाउनु हुन्छ ? यदि हो भने अब Short Cut Key प्रयोग गरि आफ्नो कम्प्युटरको द्क्षता सङै performance लाई बढाई कार्य सम्पादनलाई द्रुत र सरल बनाउन उल्लेखित कि हरुको मितब्ययी प्रयोग गरि लाभ लिनुहोस ! पटकपटक खोजी रहेन झन्झट बाट मुक्त हुन शेयर गरि आफ्नो वालमा सुरक्षित राख्नुहोस !
Tags: better to knowbetter to know in healthComputer IdeaDigital Healthpublic health update
Entrance Exam Notice of IOM For Bachelor Level